मिलनविन्दु खोज्दै ओली-प्रचण्ड
काठमाडाैं । नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टी एकताका लागि सहमतिको मिलनविन्दु पहिल्याउन थालेका छन् । मंगलबार एकता संयोजन समितिको बैठकले सहमतिका लागि दुवै अध्यक्षलाई जिम्मा दिएपछि बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दुवै नेताबीच सहमति विन्दुको खोजी भएको छ ।
पार्टी एकता विषयमा दुई कुरामा छलफल हुन बाँकी: प्रचण्ड
काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पार्टी एकताको विषयमा अब दुई वटा कुरामा छलफल गर्न बाँकी रहेको बताएका छन् ।
प्रचण्ड अचानक बिरामी, एकता समितिको बैठक स्थगित
काठमाडौं । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको स्वास्थ्यमा सामान्य खराबी आएपछि एमाले र माओवादी पार्टी एकता संयोजन समितिको आज बस्ने भनिएको बैठक अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको छ ।
एकीकृत पार्टीमा कस्तो हुन्छ अध्यक्षद्वयको हैसियत?
काठमाडाैं । एकीकृत पार्टीमा केपी ओली र प्रचण्ड दुवै अध्यक्षको हैसियतमा रहने निश्चित भइसकेको छ । दुवै अध्यक्षको जिम्मेवारी मिलाउन पहिलो नम्बरको वरीयता परिवर्तन हुने गरी अन्तरिम विधान बनाइएको छ । अन्तरिम विधानसम्बन्धी कार्यदलले बैठकको अध्यक्षता गर्ने अध्यक्ष नै पहिलो नम्बरको नेता हुने गरी विधान प्रतिवेदन बनाएको हो ।
प्रचण्डलाई सिध्याउन खोज्ने पुरस्कृत
काठमाडौं । सेनालाई जुनसुकै सिष्टम आए पनि फरक नपर्ने रहेछ । राजा सक्रिय रहेको बेला एउटा घटना भएको थियो । जसको पुनरावृत्ति गत साता देख्न पाइयो । त्यसबेला एक जना जर्नेल थिए, भिक्ट्री राणा नाम गरेका । उनलाई घर बसेको एक महिनापछि पुनर्बहाली गरिएको थियो ।
यी तीन विषयमा अड्कियो वाम एकता घोषणा
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणअघि नै गर्ने भनिएको एमाले र माओवादी एकता लम्बिएको छ । राजनीतिक र सांगठनिक तथा विधान कार्यदलले प्रतिवेदन टुंग्याइसके पनि तीन विषयमा तत्काल गाँठो फुक्ने स्थिति नदेखिएपछि एकता घोषणाको तयारी लम्बिएको हो ।
चलचित्र कान्छीको विशेष प्रदर्शनमा पुगेर प्रचण्डले यसो भने
काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले परिवारका सदस्य बिछोडको पीडालाई शक्तिमा बदलेर राष्ट्र र जनताको निम्ति समर्पित भएको बताएका छन् । आइतबार चलचित्र ‘कान्छी’ को विशेष प्रदर्शन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले पीडालाई शक्तिमा बदलेर राष्ट्र र जनताको निम्ति अझ बढी समर्पित गर्ने सङ्कल्प समेत गरे ।
नेपथ्यमा वामदेव: केपीलाई यस्तो चुनौती
काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले वामपन्थी एकतामा शंका पुग्ने गरी प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलाीलाई चेतावनी दिनुभएको छ । ओलीले विश्वासको मत लिनबित्तिकै सरकार सञ्चालनमा मनोमानी गर्न खोजेको भन्दै प्रचण्डले पार्टी एकता गर्ने भए आधा–आधा पद बाँडफाँडको माग राख्नुभएको छ ।
'प्रचण्ड सबै कुरामा हारिसकेका छन्, थाकिसकेका छन्, पार्टी एकता हुँदैन'
काठमाडाैँ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसंग पार्टी एकता र कार्यगत एकता सम्भव नरहेको नयाँशक्ति पार्टीका संयोजक डां.बाबुराम भट्टराइले बताएका छन् ।
संसदमा दाहालको रेकर्ड र ओली–गगनकाे दोहोरी
काठमाडाैं । ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन जनाउने क्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आठ वटा प्रधानमन्त्रीको समर्थक आफू बसेको स्मरण गराए। ‘१० वर्षमा १० प्रधानमन्त्री भयौं। आठ वटा प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावक मै भएछु,’ उनले भने, ‘भविष्यमा कति प्रधानमन्त्री बनाएपछि गिनिज बुकमा मेरो नाम लेखिने रहेछ ?
काठमाडाैं । ठूलो दलको हैसियतले प्रतिनिधिसभामा पहिलो बोल्ने पालो थियो, एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपालको। नेपालपछि दोस्रो दलको हैसियतमा कांग्रेस सभापति देउवाको पालो आयो। रोस्ट्रमबाट फर्कंदै गरेका नेपालले देउवासँग हात मिलाउन खोजे। देउवाले क्यामेरातर्फ नेपाललाई पनि तेस्र्याएर हात मिलाए।
‘ठूलो क्रमभंगतापछि एकै थालमा खान थाल्यौँ’
काठमाडौं । २०२८ सालमा तत्कालिन मालेलाई उग्रपन्थीको आरोप लाग्थ्यो, भने हामीलाई दक्षिणपन्थीको, जब मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यदिशा ल्याउनुभयो, एमाले बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा लाग्यो’, संसद सचिवालयमा एमाले र माओवादीका सांसदलाई प्रशिक्षण दिदै अध्यक्ष दाहालले भने ।